Waxaan doonayaa in aan bixiyo koorsada Gargaarka Degdegga, taas oo faa’iidooyin aan la soo koobi karin u leh qof walbaa. Waxaa qasab ah in qof kastaa uu la kulmi karo qof kale oo shil ama xunuun u baahan daryeel deg deg ah la il daran. Inta aanaan guda galin casharada koorsada waxaan jeclahay in aan idiin soo koobo hadafka laga leeyahay gargaarka deg dega. In la dhawro noolasha qofka, la siiyo daaweeyn aasaasi ah si qofka uusan xumada ugu dhiman (Dhimasha Illaahay ayaa hayo balse dadaal ayaa loo baahanyahay). In laga hortago in qofka miyir beelo. In laga hortago …